माइकल बोडेकर: यो Virtual Lab ले विज्ञानको कक्षामा आमूल परिवर्तन गर्ने छ - English-Video.net
आज म तपाईंहरुलाई देखाउँदै छु -
कसरी यो ट्याब्लेट र मैंले लगाईरहेको
भर्चुयल रियालिटी हेड्सेटले
विज्ञान विषयको शिक्षणमा
क्रान्ति लेराउँदै छ ।
साथै म के कुरा पनि देखाउने छु भने -
कसरी यसले विज्ञान शिक्षकलाई
दोहोरो प्रभावकारी बनाउन सक्छ ।
यसभन्दाअघि, यो कसरी सम्भव छ
त्यो तपाईंलाई देखाउँछु
आउनुस् छोटो प्रसंग जोडौं,
विज्ञान शिक्षणको गुणस्तरमा सुधार
किन महत्वपूर्ण छ ।
यसो सोच्ने हो भने,
संसार कति छिटो परिवर्तन भइरहेछ ।
परिवर्तन सँगसँगै चुनौतीहरु पनि बढ्दा छन् ।
बढ्दो चुनौतीहरु- जस्तै :
ग्लोबल वार्मिंगको सामना,
खाद्यान्न तथा पानीको अभावको समाधान,
विभिन्न रोगहरुको उपचार,
केही थोरै उदाहरण मात्रै ।
यी चुनौतिहरुको सामना गर्न,
बास्तवमा हामीलाई कसले मद्धत गर्दै छ ?
धेरै हदसम्म, यिनै युवा विद्यार्थीहरुले ।
यी युवा पुस्ता नै भविष्यका
होनहार वैज्ञानिक हुन् ।
धेरै हदसम्म हामी यिनैको भर पर्ने छौं -
भविष्यका नवीनतम र महान् आविष्कारका लागि
जसले आउँदा चुनौतीहरुको सामना गर्न
हामीलाई सहयोग गर्नेछ ।
केहि बर्ष अगाडी, मेरो सह संस्थापक र म
यसै गरी पढाउँथ्यौं ।
हामीले पढाउँदै गर्दा विद्यार्थी
लगभग यस्तै हुन्थे होलान् -
विश्वका कतिपय यूनिवर्सिटीको
बास्तविकता हो यो :
नीरस, अनि अल्छी मान्दै
जसलाई यो विषय
किन पढ्दै गरेको
भन्ने पनि मतलब छैन ।
हामीले हाम्रो वरिपरी नवीन शिक्षा
पद्धतीको खोजि गर्यौं ।
तर हामीले जे भेट्यौं, ती एकदमै
निराशाजनक थिए ।
किताबहरु इ-बुकमा रुपान्तरण भएका थिए,
कालोपाटी - यू ट्युब भिडियोमा
परिवर्तित भएका थिए
कक्षा संचालन गरिने हलहरु MOOCs मा
(Massive Online Open Courses) ।
हामीले पनि यहि गर्यौं भने
तिनै पुराना सामग्री
अरु विद्यार्थीहरुसम्म पुर्याउँथ्यौं ।
मैंले त्यो तरिका नराम्रो भन्नखोजेको होइन ।
तर शिक्षण पद्धति लगभग उस्तै हुन्थ्यो ,
नयाँपन केही हुन्नथ्यो ।
हामी अरु उपाय सोच्न थाल्यौं ।
हामीले देख्यौं - Flight Simulator
(उडान सिकाउने कम्प्युटर खेल)
वास्तविक उडान तालिम संगै
पाइलटहरुलाई खेल्न दिंदा, तालिम
बढी नै प्रभावकारी देखियो ।
हामीले विचार गयौं, यी कुरा
विज्ञान शिक्षणमा पनि
किन प्रयोग नगर्ने ?
किन Virtual Laboratory Simulator
हामीले ल्याब बनायौं ।
विशेषत: एक शिक्षक, एक प्रशिक्षक
हुने गरी हामीले पूर्ण Virtual Reality
Laboratory Simulator बनायौं,
जहाँ बिद्यार्थीहरु वास्तविक
जस्तै गणितीय समीकरणको साथमा
बिभिन्न प्रयोग गर्न सक्छन् ।
साधारण Simulations मात्र नभएर
MIT जस्ता स्तरीय युनिवर्सिटीसंग मिलेर
हामीले Advanced Simulations बनायौं ।
जहाँ, क्यान्सरको Cutting-Edge
रिसर्च समेत गर्न सकिन्छ ।
विद्यार्थीहरुलाई वास्तविक रिसर्चमा
Virtual Experiments गर्न दिएर
करोडौं रुपैंया बचाउन सक्छन् ।
त्यतिमात्र नभएर ;
मसिनको भित्री तह सम्म हेरेर
मसिनमा के हुदै छ समेत बुझ्न सक्छन् ।
खतरापूर्ण परिक्षण गर्न समेत
सजिलै सक्षम हुनेछन्।
साल्मोनेला ब्याक्टेरियाको बारेमा जान्नु
एउटा महत्वपुर्ण विषय हो ।
तर सुरक्षाको कारण, धेरै स्कूलहरुले
पढाउन सक्दैनन् ।
हामी बिद्यार्थीलाइ यो काम दिएर,
शिक्षकलाइ पुरै ड्यास बोर्ड दिएर, उनीहरुले
बिद्यार्थीले कत्तिको बुझेका रहेछन,
थाहा पाउन सक्छौं ।
त्यति मात्र होइन,
बिद्यार्थीलाई किन क्लासमा व्यस्त बनाउन
आवश्यक छ, हामीले बुझेका छौं ।
त्यसैले रमाइलो र आकर्षक कथाहरु जोड्न
हामीले गेम डिजाईनरहरुको मद्धत लियौं ।
उदाहरणको लागि यो कक्षामा
आफ्नो विज्ञान क्षमताको पूर्ण सदुपयोग गर्दै
बिद्यार्थीहरुले CSI रहस्यमय घटना
सुल्झाउनु पर्छ ।
यी कामहरु गर्दा हामीले पाएको प्रतिक्रिया
अत्यन्त सकारात्मक छ ।
यहाँ ३०० जना बिद्यार्थीहरु आफूले
जानेको बिज्ञान ज्ञानको प्रयोग गर्दै
धैर्यपूर्वक CSI मर्डर केस सुल्झाउँदै छन ।
मलाई सबैभन्दा रमाइलो लाग्ने कुरा,
कहिले कहीं बिद्यार्थीहरु क्लास पछि
छक्क पर्दै आउछन् र भन्छन्
यो Virtual Lab मा Facebook नै नहेरी
२ घण्टा बितेको पत्तै पाइनं ।
यसरी बिद्यार्थीहरुले समय बितेको
पत्तै पाऊदैनन् ।
यसको बास्तवमै काम गरेको
नगरेको अनुसन्धान गर्न
Stanford University र
Denmark का १६० बिद्यार्थीहरुमा
अनुसन्धान गरियो ।
उनीहरुले ती बिद्यार्थीहरुको समूहलाई
२ भागमा बाँडे -
र अर्को समूहलाइ पुरानै
शिक्षण पद्धति दिइयो ।
दुवै समूहलाइ बराबर समय दिइयो ।
अनुसन्धान गर्नु अघि
र पछि बिद्यार्थीहरुको जांच लिइयो ।
यसरी उनीहरुले विद्यार्थी सिकाई प्रभाबलाई
प्रस्ट रुपमा परिक्षण गर्न सकियोस् ।
अनुसन्धान नतिजा अनुसार:
पुरानो शिक्षण पद्धति भन्दा नयाँ पद्धति
पढ्ने ७६% बिद्यार्थीहरुको
सिकाई - गुणस्तरीय थियो ।
अझ रमाइलो कुरा
अनुसन्धानको दोस्रो पाटो -
शिक्षकहरुमा पार्ने प्रभाव थियो ।
के पत्ता लाग्यो भने -
शिक्षकद्वारा दिइने कक्षा, प्रशिक्षण र
Virtual Laboratories संयुक्त
गर्ने हो भने,
सिकाईको गुणस्तरमा १०१ % ले
वृद्धि भएको देखियो ।
र उत्तिकै समय अबधिमा बिज्ञान शिक्षकको
प्रभाव पनि दोब्बर देखियो ।
केहि महिना पछि
हामीले हामीलाई प्रश्न गर्यौं
अहिले हामी संग- प्रशिक्षार्थी मनोबिज्ञ,
शिक्षक, बैज्ञानिक, गेम ड़ेवलपरहरुको
राम्रो समूह छ
फेरी आफैंलाई प्रश्न गर्यौं -
निरन्तर नयाँ शिक्षा पद्धति निर्माण गर्ने
हाम्रो प्रणलाइ राख्न सक्छौं ?
हामीले लामो समयदेखि निर्माणगर्दै गरेको र
कठिन कामको बारेमा प्रस्तुत गर्न पाउँदा
आज म खुशी छु ।
यो के हो त, म छोटकरीमा भन्ने छु ।
मेरो हातमा यो मोबाइल फोन छ,
प्राय: बिद्यार्थीहरुसंग पहिले नै
यो स्मार्ट फोन छ ।
मैंले यसलाई Virtual-Reality Headset
संग Plug In गरेको छु ।
शाब्दिक रुपमा भन्दा,
अब म यो Virtual World मा प्रवेश गर्न सक्छु
केही दर्शकहरुलाई पनि हामीले
यो मौका दिएका छौं ।
कुन हद सम्मको यो वास्तविक संसार लाग्छ,
त्यो थाहा पाउन, तपाईंले यो हेर्नैपर्दछ ।
अब म बास्तबिकतामै यो ल्याबमा प्रवेश गरेको
महसुस गर्दै छु ।
मलाई स्क्रिनमा देख्नुभो ?
दर्शक : देख्यौं
माइकल बोडेकर : गज्ज़ब !!
मैले भर्खरै मेरो मोबाइल फोन अन गरें -
अब म, अत्याधुनिक, बिशाल,
करोडौं रुपिया पर्ने
ल्याबसंग अन्तरक्रिया गर्न सक्छु ।
उदाहरणको लागि, अब म यो औजार लिएर
अनुसन्धान गर्न सक्छु ।
म संग E-Ggel, PCR छन,
हेर्नुस त त्यहाँ
मसंग अत्याधुनिक परीक्षण मसिन छ ।
त्यहाँ Electron Microscope छ
आफ्नो खल्तीमा Electron Microscope
राखेर कोही हिड्छ ?
यहाँ परीक्षण उपकरण छ
यसको सहायताले म
बिभिन्न परिक्षण गर्न सक्छु
यहाँ ढोका छ,
यहाँबाट म अरु परीक्षणमा जान सक्छु,
ल्याबरोटरीमा काम गर्न सक्छु ।
यो मेरो पढ्ने ट्याब्लेट हो,
यो साह्रै चलाख छ ।
यसले मलाई Relevant Theory पढ्न दिन्छ ।
म यससंग अन्तरक्रिया गर्न सक्छु ।
म यसमा विडियो हेर्न सक्छु, परिक्षण
गर्दै गरेको बिषयमा
आवस्यक जानकारी खोज्न सक्छु ।
यहाँनिर म्यारी छन् ।
उनी मेरो शिक्षक र ल्याब सहायक हुन् ।
उनले मलाई सम्पूर्ण ल्याबको
पथ प्रदर्शन गराउछिन् ।
शिक्षकहरु अहिले म भैरहेको Virtual संसारमा
आफैंलाई Teleport गर्नेछन,
अनि यही उपकरणको सहायताले
मलाई मद्धत गर्न, मार्ग निर्देशन
गर्न सक्नेछन ।
यो बिषयलाइ सम्पन्न गर्नु अगाडी,
म तपाईलाइ अझ मज्जाको कुरा
देखाउन गइरहेको छु ।
यस्तो काम तपाईं वास्तविक
परीक्षणशाला पनि गर्न पाउनुहुन्न ।
यो PCR मशिन हो
अब म यो परिक्षण गर्न जादै छु ।
भर्खरै मैले मेरो आकार
लाखौं गुणा सानो बनाएँ,
झन्डै अणुको आकारमा ।
यो तपाईंले पनि अनुभव गर्नुपर्छ ।
यस्तो लाग्दैछ, म मसिन भित्र उभिरहेकोछु ।
म अणु र DNA सबै देख्दै छु,
Polymerase र Enzymes देख्दै छु ।
DNA को लाखौं गुणा प्रतिलिपि बन्दै छ,
त्यसरी नै जसरी येतिखेर हाम्रो
शरीरमा बन्दै छ ।
यो प्रक्रिया कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा म अब
नजिकबाट बुझ्न र अनुभव गर्न सक्छु ।
मलाई आशा छ, नयाँ प्रबिधियुक्त यो मसिनको
सम्भावनाको अलि अलि ज्ञान भयो होला ।
र म अगाडी जोड दिन चाहन्छु,
हामीले भर्खर देखेका कुराहरु
iPad र Laptop हरुमा
Headset बिना पनि देख्न सकिन्छ ।
यो कुरा महत्वपुर्ण भएकोले भन्दै छु ।
आउँदो पुस्ताका बैज्ञानिकहरुलाई
बल र हौसला प्रदान गर्न,
शिक्षकहरुले नयाँ प्रविधिहरु
अत्यन्त आवश्यक छ ।
धेरै कारणले मलाई लाग्छ,
बिज्ञान शिक्षणमा रहेको Quantum Leap
अब प्रविधिको कारण होइन,
कक्षा कोठामा नया प्रबिधि भित्र्याउने
एवं प्रबिधि आत्मसाथ गर्ने
शिक्षकको बिबेकमा निर्भर गर्दछ ।
धेरै विश्वविद्यालय, स्कूल
शिक्षकले यसको पूर्ण क्षमतालाई बुझ्न
प्राबिधिक सहकार्य गर्नेछन् ।
मलाई सधै प्रेरणादिने
यो कथा संगै बिदा माग्दछु -
यो कथा हो ज्याक एन्द्रकाको ।
तपाईहरुले चिन्नु पनि हुन्छ होला ।
ज्याकले न्यून खर्चमा
प्यान्क्रियाज क्यान्सर पत्ता लगाउने
प्राबिधि को आविस्कार गरे,
१५ बर्षको उमेरमा ।
उसले आफ्नो महान आविस्कारको बारेमा
अरुलाई सुनाउदा भन्छ, एउटा कुराले
यो आविस्कार गर्न झन्डै रोकेको थियो ।
त्यो हो - वास्तविक प्रयोगशालामा
उसको पहुँच थिएन ।
किनकि, ल्याबमा जान उसको अनुभव
अत्यन्त थोरै थियो ।
कल्पना गरौँ, हामीले यदि संसारभरी नै,
ज्याकजस्ता सबै बिद्यार्थीलाई अत्याधुनिक,
करोडौं रुपया पर्ने,
Virtual Lab र
मसिन-उपकरण दिने हो भने,
खुशीले उफ्रंदै जो कोहि पनि यहाँ
बैज्ञानिक बन्नेछन् ।
अनुमान लगाउनुहोस्, यसले नयाँ पुस्ताका
समग्र जवान र जेहेन्दार
बैज्ञानिकहरुलाई नया अन्वेसण र आविष्कारले
संसार परिवर्तन गराउन
कति हौसला र शक्ति दिनेछ
माइकल बोडेकर: यो Virtual Lab ले विज्ञानको कक्षामा आमूल परिवर्तन गर्ने छ | TED Talk | TED.com